राजपाको माग पूरा गरौ, ‘एमालेले पनि खुला दिलले संविधान संशोधन प्रस्ताव कतिसम्म पास गर्न हुने हो भन्नु पर्छ – रामचन्द्र पौडेल – Sanghiya Online
Posted on : July 7, 2017 - No Comment
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख विपक्षी एमालेसामू संविधान संशोधनबारे खुला दिलले छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । संसदमा विशेष समय लिएका कांग्रेस नेता पौडेलले ‘भत्केको घरको जता हेर्‍यो उतै दैलो’ भने जस्तो अवस्था रहेको भन्दै आफ्नो सम्बोधन सुरु गरेका थिए । स्थानीय चुनावमा धेरै आर्थिक चलखेल भएको सूचना आफूले पाएको भन्दै उनले पैसाकै बलमा चल्दै जाने हो भने लोकतन्त्र नै घाइते हुने बताए ।
असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने चुनावमा राजपा आउने नआउने र सहज रुपमा चुनाव हुन दिन नदिने अझै टुंगो नभएको भन्दै अब प्रमुख दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘एमालेले पनि खुला दिलले संविधान संशोधन प्रस्ताव कतिसम्म पास गर्न हुने हो ? कतिसम्म पास गर्न नहुने हो ? प्रष्ट कुरा गरौं र यतिसम्म गरौं भनेर राजपासँग खुलेर कुरा गरौं ।’
चुनावको मुखमा गएर छलफल गर्नु भन्दा अहिले समयमै छिनोफोन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख विपक्षी एमालेसामू संविधान संशोधनबारे खुला दिलले छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । संसदमा विशेष समय लिएका कांग्रेस नेता पौडेलले ‘भत्केको घरको जता हेर्‍यो उतै दैलो’ भने जस्तो अवस्था रहेको भन्दै आफ्नो सम्बोधन सुरु गरेका थिए । स्थानीय चुनावमा धेरै आर्थिक चलखेल भएको सूचना आफूले पाएको भन्दै उनले पैसाकै बलमा चल्दै जाने हो भने लोकतन्त्र नै घाइते हुने बताए । असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने चुनावमा राजपा आउने नआउने र सहज रुपमा चुनाव हुन दिन नदिने अझै टुंगो नभएको भन्दै अब प्रमुख दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘एमालेले पनि खुला दिलले संविधान संशोधन प्रस्ताव कतिसम्म पास गर्न हुने हो ? कतिसम्म पास गर्न नहुने हो ? प्रष्ट कुरा गरौं र यतिसम्म गरौं भनेर राजपासँग खुलेर कुरा गरौं ।’ चुनावको मुखमा गएर छलफल गर्नु भन्दा अहिले समयमै छिनोफोन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
उपेन्द्र यादवको प्रश्न – ” राजपाले देउवालाई भोट हाल्न हुने, तर स्थानीय चुनावमा मधेशी उम्मेदबारलाई भोट हाल्न नहुने किन ?
पार्टी कमिटी भद्दा बनाएको नेकपालाई अहंकार र दम्भ छाड्न जनताले धुलो चटाएको छ – नेपाल
मुठभेड गर्ने आँट भए रोल्पा आउन गगन थापालाई पुनको चुनौती, फ्री मा ट्रेनिङ दिने धम्कि
मेरो चीन भ्रमणको निष्कर्ष तपाईंहरूले चाँडै देख्नुहुनेछ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
न संबिधान संशोधन, न त रेशम रिहा, फोरममा मच्यो हलचल, सरकारमा बसे पत्ता साफ निश्चित
राजसंस्था ब्यूतिने र चाँडै कडा कदम चाल्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको दाबि, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने भनाइ
सप्तरी पुगेर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले बाढि पीडितकालागि के के घोषणा गर्नु भयो ? पढ़नुहोश बुँदागत रुपमा